Ngathi | Qingdao Florescence Co., Ltd.
Qingdao Florescence Co., Ltd.kuyinto umenzi ityhubhu yangaphakathi kunye namava imveliso iminyaka engama-26. Imveliso yethu ikakhulu kubandakanya irabha yendalo kunye neetyhubhu zerabha zangaphakathi zebhayisekile, isithuthuthu, izithuthi, iityhubhu zobunjineli kunye neflab yerabha, ikwavelisa ityhubhu yerabha ye-inflatable, imibhobho yokudada edadayo, iityhubhu zemidlalo njlnjl. Inkampani yethu inabasebenzi abangama-500 (kubandakanya iinjineli eziphezulu ezili-12 Abasebenzi abangama-60 abaphakathi nabaphezulu nobungcali).
Iimveliso ze-Florescence ziyilelwe, zenziwe, kwaye zavavanywa nge-ISO9001 nganye, kwaye yadlula i-CCC, i-CIQ, i-SONCAP, uvavanyo lwe-PAHS. Zonke iiyunithi ziveliswa kwaye zihlolwe ngokungqongqo ngesiqwengana, zonke iityhubhu ziya kuhlolwa ngokunyuka kwamaxabiso emoyeni iiyure ezingama-24.
Exhotyiswe ngumenzi ophambili, uvavanyo kunye nezixhobo zeR & D, iFlorescence iba ngumthengisi weTshayina ophambili kunye neembali ezinde kakhulu, ukukhula okukhawulezayo, eyona mali ininzi kunye netekhnoloji kunye neemveliso ezikhuphisanayo. Ifumaneka kwizibuko laseQingdao, iFlorescence inokuphendula ngokufanelekileyo kuzo naziphi na iimfuno ezingxamisekileyo zemibhobho yangaphakathi kunye nokugquma kuluhlu olubanzi lweemveliso.
Iimveliso zethu zisiwe kumazwe angaphezu kwama-20 kwihlabathi liphela, kuthandwa ngabathengi basekhaya nabangaphandle. Ngapha koko, sidlulile kwi-ISO9001: imvume ye-2008 kwaye sineenkqubo zolawulo lwangoku kunye nezenzululwazi ezibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezinoxanduva. Sibambelela kule mithetho yokusebenza ilandelayo ethi “Ukuphila ngetyala, ukuzinzisa ngokuxhamla ngokuhlangeneyo, ukuphuhlisa ngomzamo odibeneyo, ukuqhubela phambili nobuchule” nokufuna umgaqo wobulunga “wentsilelo engeyiyo”. Sinethemba lokuseka ubudlelwane bokuwina kunye nokuphumelela kunye nawe ngokusekwe kwiimveliso ezigqwesileyo kunye nenkonzo egqibeleleyo yokufumana inzuzo kunye nophuhliso oluqhelekileyo!